संघर्षको अर्को नाम डिके शर्मा, जो नाट्टा निर्वाचनमा द्वितीय उपाध्यक्षमा लड्दैछन्
गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ।
दिपेन्द्र कुमार घिमिरे (डिके शर्मा) ट्राभल, ट्रेड क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो । विगत दुइ दशकभन्दा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशिल शर्मा डिके टुर्स एण्ड ट्राभलका प्रवन्ध निर्देशक हुन् ।
शर्मा आगामी माघ ३ गते हुन गईरहेको नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को द्वितीय उपाध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् । मधुसूदन आचार्य समूहबाट उनले सो पदका लागि उम्मेद्वारी दिएका हुन ।
डिके शर्मा यसअघि दुई कार्यकाल नाट्टाको कार्यसमिति सदस्य भईसकेका उम्मेद्वार हुन् । यसअघि सन् २०१० देखि २०१४ सम्मको दुई कालकाल उनी संस्थाको कार्यसमिति सदस्य थिए । ‘दुई कार्यकाल संस्थाको कार्यसमिति सदस्य भईसकेको हिसावले पनि द्वितीय उपाध्यक्षमा मैले दावेदारी दिएको हुँ ।’ शर्मा भन्छन् । लामो समयदेखि ट्रेड र नाट्टामा आवद्व भएको हिसावले साथीहरुको आग्रहअनुरुप आफू उम्मेद्वारमा उठेको शर्माको भनाई छ ।
आफ्नो टिम पूर्ण व्यवसायीक रहेको शर्माको दावी छ । ‘यो टिम टिकेटिङ, टुरका साथै भारत, चीन मार्केटलाई समेटेर समावेशी रुपमा बनाईएको छ ।’ शर्मा भन्छन्, ‘यसबाहेक नयाँ, पुराना र अनुभवी सबै पक्षको फ्यूजन हो, हाम्रो टिम ।’
‘आफूहरु सहमतिकै पक्षमा रहे पनि सोको सम्भावना नदेखिएपछि निर्वाचनमा होमिएको उनको भनाई छ । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपाली पर्यटनमा निम्त्याएको संकटकाबीच नाट्टालाई सहमतिय आधारमै अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो ।’ शर्मा भन्छन्, ‘तर, सोको सम्भावना देखिएन ।’
यद्यपी, आफ्नो टिम व्यवसायीक हकहितका लागि मरिमेट्ने भएकाले आगामी दिनमा नाट्टालाई अगाडि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको प्रतिवद्वता छ । ‘नाट्टाको खुम्चिएको इमेजलाई हामी उजिल्याउँछौँ ।’ शर्मा भन्छन् । यसैगरी आएटाको विषयमा शर्मा भन्छन्, ‘महिनामा दुईपटक तिर्नुपर्ने आएटा भुक्तानीलाई वर्तमान कार्यसमितिले चारपटक तिर्नुपर्ने बनाएको छ । यसमा केही पहल गर्न सकेको खण्डमा पुनः पुरानै अवस्थामा वा महिनाको तीनपटकमा झार्न सक्ने पहल हामीले गर्नेछौँ ।’
आफूहरुलाई व्यवसायीहरुको व्यापक समर्थन रहेको शर्माको दावी छ । ‘हामीलाई अधिकांश व्यवसायीहरको साथ र समर्थन छ ।’ शर्मा भन्छन्, ‘संस्थालाई नयाँ गति दिन हाम्रो टिम अपरिहार्य छ ।’
सबै सफल व्यक्तिहरुको जीवन प्रायः संघर्षशिल नै हुन्छ । संघर्षले मान्छेलाई बाँच्न सिकाउँछ भने धैयर्ताले सफलता प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले, जसले संघर्ष गर्न सक्छ, उसले नै सफलता हात पार्छ ।
यी पंतिहरुका गतिलो पर्याय हुन् –युवा पर्यटन व्यवसायी दिपेन्द्रकुमार घिमिरे । जसले छोटो समयमानै ट्राभल, ट्रेक्समा सफलता प्राप्त गरे ।
एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएका घिमिरेले राजधानीमा भोग्नुपरेका चुनौती र संघर्षका कारण आजको स्थितिमा आईपुगेका हुन् । उच्च शिक्षाको अध्ययनको शिलशिलामा राजधानीको एक होटलमा सामान्य जागिरको सुरुवात गरेका घिमिरेको बेलायत जाने सुनौलो अवसरसँगै आफ्नो वैयक्तिक र व्यवसायीक जीवनमा नै क्रान्ति ल्याईदियो । यद्यपी, उनका यसक्रममा उनले भोगेका चुनौतीका चाङहरुको नजरन्दाज गर्न कदापी मिल्दैन ।
बेलायती जीवनशैली र परिवेश त्यागेर स्वदेश फर्केपश्चात उनले वि.सं. २०५६ सालमा डि.के. टूर्स एण्ड ट्राभल्स स्थापना गरे । जसको अफिस राजधानीको कान्तिपथस्थित निवाचन आयोगको अगाडि रहेको छ ।
त्यही ट्राभलले आज उनलाई ट्राभल क्षेत्रमा सफल बनाएको छ, चिनारी दिएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि टिकेटिङको काम गर्दै आएको यस ट्राभलले आफ्ना सेवालाई विश्वव्यापी बनाइसकेको छ । आएटा, उफ्टा तथा नाट्टाको सदस्य रही व्यवसायीक सेवा प्रदान गर्दै आएको डिके ट्राभल्सले खाडी मुलुकका एयर अरेयिबा, बहराईन एयर, फ्लाई दुबई सेल गर्दै आएको छ भने युरोप, अमेरीकामा गल्फ, कतार र इतिहादको सेल गर्दै आएको छ । यसका साथै मलेसिया, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, र फिलिपिन्सका लागि आर.ए., थाई विमान, जिएमजीलाई सेल गर्ने बताईन्छ ।
व्यवसायीक दक्षता र सेवाका कारण यो ट्राभल चर्चित रहेको छ ।